यो खुट्टाको औला सामाजिक सञ्जालमा किन बनिरहेको भाइरल ! थाहा पऔनुहोस – Enepali Samchar
यो खुट्टाको औला सामाजिक सञ्जालमा किन बनिरहेको भाइरल ! थाहा पऔनुहोस
December 1, 2020 adminLeaveaComment on यो खुट्टाको औला सामाजिक सञ्जालमा किन बनिरहेको भाइरल ! थाहा पऔनुहोस
ऐजेन्सी । ताइवानमा बस्ने एक युवतीको खुट्टाको औला २ इन्च लामो भएकै कारण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । उनको खुट्टाका औला देखेर जो कोही पनि हातको वा खुट्टाका औला हुन् भनेर अलमलमा पर्ने गरेका छन् । युवती ताइवान विश्वविद्यालयकी छात्रा हुन् ।
उनले खुट्टाको औलाले नै टिभीको रिमोटको बटन थिचेर च्यानल परिवर्तन गर्न सक्ने बताउदै आएकी छिन् । मानिसहरुले युवतीको लामो औला भएकै कारण भुतिया भन्ने गरेका छन् । उनले आफ्नो औलालाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले मन पराएको बताउँछिन् । युवती मन्दिरमा गएर आफ्ना दुई खुट्टाका औलाले नै भगवानको प्राथना गर्ने गर्छिन् ।
ताइवानमा बस्ने एक युवतीको खुट्टाको औला २ इन्च लामो भएकै कारण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । उनको खुट्टाका औला देखेर जो कोही पनि हातको वा खुट्टाका औला हुन् भनेर अलमलमा पर्ने गरेका छन् । युवती ताइवान विश्वविद्यालयकी छात्रा हुन् ।
यस्तो छ अन्तिम संस्कारमा शवको टाउकोमा हान्नुको रहस्य
अमेरिकालाई पछी पार्दै विश्‍वभर प्रभुत्व जमाउने देश अब जापान ?